खाना खाने अनेक शैली – MB Khabar
प्रागैतिहासिक कालदेखि हाम्रो संरक्षण र प्रगतिको आवश्यकताले धेरै नयाँ उपकरणहरूको सिर्जना भएको छ । खाना पकाउने भाँडाकुँडादेखि खाना खानेसम्मका सबैखाले संस्कारहरू प्राग ऐतिहासिक कालदेखि नै चल्दै आएको चलन हो । अहिले विश्वका विभिन्न ठाउँमा चलनमा रहेको पाककला शताब्दीयौंसम्मको अथक प्रयासपछि विकसित गरिएको एउटा सांस्कृतिक सम्पदा हो । प्रत्येक जातीय समूहले खानामा पूर्ण सन्तुष्टिप्राप्त गर्नको लागि खानाको परिकार अनुसार खाद्य शैलीसमेत अँगाल्ने गर्छन् ।
कटलरी शब्दले काँटा, चक्कु र चम्चा जस्ता आधुनिक उपकरणको प्रतिनिधित्व गर्छ । यी सबैले कुनै न कुनै सं‌स्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्छन् । चम्चा पनि एउटा पुरानो खानाको औजार हो । जुन मानव इतिहासको प्रारम्भिक युगमा बनेको बताइन्छ । धेरै प्राचीन सभ्यताहरूले आफ्नै विशिष्ट डिजाइनमा यसको प्रयोग गर्ने गर्दथे । प्राचीन ग्रीकहरूले समुद्री कवचहरू, रोमनहरूले काठको र पुरातन इजिप्टियन फारोनहरूले सुनौलो र चाँदीका चम्चाहरू प्रयोग गर्थे । युरोपमा मध्ययुगको आगमनसँगै काठ र धातुका चम्मचहरू सामान्य भए र त्यसबेलादेखि तिनीहरू आधुनिक खाने भाँडाका अभिन्न अंग भए । तर अहिले भूगोल र खानाको संस्कार अनुसार यसको प्रयोग फरक हुँदै गए ।
हामी कल्पना गर्न सक्छौं चम्चा, काँटा वा चक्कुको प्रयोग गरेर ठूलाठूला आकारमा काटिएको मासु खान सकिन्छ होला त ? पक्कै सकिँदैन यसको लागि हामीले हातले समातेर नै टोक्नुपर्छ । तर रसदार खाना ? यसलाई हातले खान सम्भव हुँदैन। यसको लागि चम्चाको आवश्यकता पर्छ । हाम्रो परम्परागत संस्कार नहुँदा नहुँदै पनि चाउमिन खाँदा काँटाको प्रयोग र सामान्यतया अरू खाजा खाँदा चम्चाको प्रयोग काठमाडौंमा सामान्य भइसकेको छ । साथै, खाना खाने बेलामा चम्चाले खाने र हातले खानै दुवै चलन नेपालमा जारी छ । नेपालमा हातले खाना खान बच्चैदेखि सिकाउने गरिन्छ । तर चीन, कोरिया, जापान र भियतनाममा धेरै बच्चाको लागि पहिलो खानाको सिकाइ नै सिन्काबाट सुरु हुन्छ । सिन्काबाट खाना खान सिकाउने क्षेत्रमा हातले खाने खानालाई असभ्यताको रूपमा लिइन्छ भने हातले खाना खाने संस्कार रहेको क्षेत्रमा यसैको महत्व धेरै देखिन्छ ।
यसबाहेक अन्य अनेक खाद्य औजार रहेको पाइन्छ । जुन परम्परागत उपकरण समेत हुन् । चोपस्टिक्स चीनको खाद्य उपकरण हो । यो चीनबाट उत्पन्न भएको भए पनि यसले विश्वका धेरै मुलुकमा चर्चा पाइसकेको छ । अहिले यो उपकरण बढी जापान, कोरिया र भियतनाम जस्ता देशमा प्रचलनमा आउने गर्छन् । त्यस्तै, अहिले हामीले प्रयोग गर्ने काँटा आकारको उपकरण पुरातात्विक उत्खनन्बाट इसापूर्व २४०० देखि १९०० इपूसम्म चलेको मानिने काँस युगसम्म भेटिएको छ । यो त्यतिबेला चिनियाँ शाङ शासकको समयमा रहेको क्विजा संस्कृतिमा भेटिएको हो । सामान्यतया पश्चिमी मुलुकहरूमा सामान्यतया चक्कु, काँटा र चम्चा अनिवार्य पाइन्छ ।
यद्यपि हातले खाना खाने संस्कार भारतवर्षबाहेक अफ्रिका र मध्यपूर्वमा देखिन्छ । भारतवर्षमा एकाधबाहेक धेरैले दायाँ हातले नै भात खाने गर्छन् । अफ्रिकामा दक्षिण एसियाको समान नियम रहेको छ । दुई कचौरा पानी तपाईंको थालसँगै राखिन्छ । यसको अर्थ एक कचौरा खाना खानु अघि हात धुनको लागि र अर्को खाना खाइसकेपछि हात धुनको लागि । त्यस्तै मध्य-पूर्वमा पनि यस्तै खाले संस्कार पाइन्छ । हातले खाना खाने संस्कार एउटा लामो सभ्यताको साक्षी हो ।
शिशुलाई ठोस आहार कहिले ?